Sane oo £37m ugu wareegaya Manchester City - BBC Somali
Image caption Leroy Sane, oo u dheela kooxda Schalke oo la filayo inuu u wareego Man City
Kooxdan ka dheesha horyaalka Bundesliga-ha Jarmalka ayaa manta oo Isniin ah ku dhawaaqday in ciyaaryahankan ka dheela khadka dhexe uusan soo xaadirin tababarka diyaargarowga ah ee ay kooxdu ku sameynayso xarun ku taal dalka Austria, balse uu aadayba magaalada Manchester.
Tababaraha kooxda Manchester City, Pep Guardiola, ayaa 21 bishii Luulyo xaqiijiyay inuu doonayo saxiixa ciyaaryahan Sane.
20-jirkan ayaa gacan ka siiyay xulka Jarmalka inuu gaaro rubac dhammaadka koobkii Qaramada Yurub ee Euro 2016, isagoo markii ugu horreysay u safta xulka Jarmalka bishii Nofeembar.
Leroy Sane, ayaa goor sii horreysay waxa uu u sheegay agaasimaha kooxda Schalke, Christian Heidel, inuu doonayo inuu isaga tago kooxda, sida ay sheegtay warbaahinta Jarmalka.
Sane, ayaa ku soo shaac baxay kooxda da’da yar ee Schalke, isagoo ciyaartii ugu horreysay kooxda weyn u saftay bishii Abriil 2014.
33 kulan oo uu xagaagii la soo dhaafay u dheelay kooxda Schalke ayuu u dhaliyay 8 gool, iyadoo kooxduna ay kaalinta shanaad ku dhameysatay kala horreynta tartanka Bundesliga-ha, sidaana ay sanadkii labaad ee isxiga uga hartay tartanka Horyaalada Yurub ee Champions League.